Vaovao - Raha ny hevitry ny besinimaro, ny solomaso solomaso dia "fitaovana fahavaratra", fa fantatrao ve?
Solomaso hazavana manga
Clip amin'ny solomaso solomaso
Solomaso solomaso fanatanjahan-tena
Raha ny hevitry ny besinimaro, ny solomaso solomaso dia "fitaovana fahavaratra", fa fantatrao ve?
Raha ny hevitry ny besinimaro, ny solomaso dia "fampiasa amin'ny fahavaratra", fa fantatrao ve? Manimba ny maso koa ny taratra ultraviolet amin'ny ririnina. Na dia amin'ny andro rahona aza dia mbola hahatratra ny masonao ihany ny UVA sy UVB. Raha ny marina dia marefo sy marefo kokoa ny masontsika amin'ny ririnina. Amin'ny lafiny iray, noho ny rivotra, ny hamandoana ambany ary ny rivotra mikorontana amin'ny ririnina; etsy an-danin'izany, ny tampon'ny lalana dia mihamangatsiaka amin'ny ririnina, izay hamokatra hazavana manjelanjelatra manjelanjelatra ambanin'ny tara-masoandro. Noho izany, na dia amin'ny fararano sy ririnina aza, ny solomaso dia tsy tokony ho ambany. Nasehon'ny fanadihadiana fa ny lanezy dia afaka manome taratra ny 85% amin'ny taratra ultraviolet an'ny masoandro. Ity ampahan'ny taratra ultraviolet ity dia mety hiteraka sunburn kornea sy "fahajambana amin'ny lanezy". Ny fahajamban'ny lanezy dia hahatonga anao tsy hahita fahitana mandritra ny fotoana fohy, ary hitondra fanaintainana anao ny fizotrany. Ny fanaovana solomaso solomaso no fomba tsara indrindra hialana amin'izany. Misafidiana solomaso mainty iray maivana sy maivana ary tsy misy fihenjanana na dia itondrainao tontolo andro aza izany.
Vonona ny hiaro ny masonao? Avy eo, jereo ny solomaso efa natolotray ho anao.
Ny solomaso kianjan'ny Square Frame no endriny vaovao indrindra tamin'ny taona 2020. Ny tabilao supersized dia malaza amin'ity taona ity. Ny endriny dia mitovy amin'ny solomaso ski, miaraka amin'ireo zana-kazo manalalaka mba hanasongadinana ny fizarana sahy.
Raha ny fieritreretana solomaso fidirana ambaratonga fidirana izay tsy dia mihoa-pefy loatra, ny safidy voalohany dia tokony ho fomba mahazatra nostalgika. Satria ny hatevin'ny endriny dia antonony, ny endriny dia fototra, somary mora ny misafidy ny tarehy, ary mbola tsy mivoaka amin'ny endrika maitso mandavantaona izy io, ary mora ny mifehy sy mifanitsy aminy. Ny fiverenan'ny endriny Oversize amin'ny tontolon'ny lamaody dia tena vokatry ny gucci. Tao anatin'ireo vanim-potoana farany teo, teo amin'ny flyover gucci, ny maodely lahy sy vavy dia nitafy fomba roa vita amin'ny metaly Oversize, miaraka amina loko Retro matanjaka, ary manome endrika endrika tanora. fofonaina. Satria afaka mandrakotra ny ankamaroan'ny tarehy ny endriny Oversize, dia misy vokany lehibe amin'ny tarehy izany. Ny solomaso koa mety ho lamaody be. Misy foana ny zana-kazo isan-karazany izay mifanaraka aminao indrindra ~
Fotoana fandefasana: Aug-28-2020
12 taona niainana varotra iraisam-pirenena
Fandaharam-potoana fandefasana marina
Serivisy fiheverana aorian'ny fivarotana
Room A328, Kechuang Pioneer Park, Distrikan'i Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, Sina
Solomaso, palitao, sneaker ...
Vinavina ho an'ny 2025: Tatitra momba ny Sports B ...
Inona no karazana solomaso tadiavinao ...
Mbola misafidy ny fihodinana nentim-paharazana ...
Raha ny hevitry ny besinimaro, ny solomaso dia R ...